တန်ချိန် ၃၀၀၀၀ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
နှစ်စဉ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတန်ချိန် ၃၀,၀၀၀ ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများသည်ကြက်ချေးနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဘဏ္treာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေပြီးစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အမှုန်များ၏ပုံသဏ္cylာန်သည်ဆလင်ဒါသို့မဟုတ်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်ကြားခံထုတ်လုပ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့် hopper နှင့် feeder၊ buffer granulation စက်အသစ်၊ dryer၊ roller ဆန်ခါစက်၊ ရေပုံးတစ်ပုံး၊ belt conveyor၊ packet machine နှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုမီသိန်းအညစ်အကြေးများ၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်မြေ waste ဇာနှင့်မြူနီစီပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးရှိစီးပွားဖြစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီထပ်မံပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်လုံးဝကျိုးနပ်ပါသည်။
၁။ တိရိစ္ဆာန်မစင်များ - ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ မြင်း၊
၂။ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ကောက်ပဲသီး၊ ပဲပိစပ်၊ မုဒိမ်းမှု၊ ချည်မှုန့်၊ ပိုးဖုန်မှုန့်၊ တဆေးမှုန့်၊ မှိုအကြွင်းအကျန်စသည်တို့။
၃။ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - ၀ ိုင်၊ အချိုမှုန့်၊ ရှလကာရည်အကြွင်းအကျန်၊ ပီလောပီနံအကြွင်းအကျန်၊
၄. မြူနီစီပယ်ရွှံ့နွံများ - မြစ်ရွှံ့၊ ရွှံ့နွံ၊ မြောင်း၊ ပင်လယ်ရွှံ့၊ ရေကန်၊
၅။ အိမ်ထောင်စုအမှိုက်: မီးဖိုချောင်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစသဖြင့်
၁။ Semi-wet material crusher သည်ကုန်ကြမ်းများ၏အစိုဓာတ်ကိုပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အသုံးပြုသည်။
2. အမှုန်အပေါ်ယံပိုင်းစက်သည်အလင်းဆုံမှုန်အရွယ်အစားကိုညီမျှစေသည်၊ မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ခွန်အားမြင့်သည်။ အမျိုးမျိုးသော granulators နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်သင့်လျော်သော။
၃။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံးကို Belt conveyor နှင့်အခြားအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။
အအေးခံစက်၊ အအေးခံစက်၊ ဆီလီကွန်၊ အပြည့်အ ၀ အော်တိုထုပ်ပိုးစက်၊ ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲစက်၊ ခါးပတ်ပေါ်တင်စက်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာတစ်ခုလုံး၏အခြေခံထုတ်လုပ်မှုတွင်ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခြင်း→ ကစော်ဖောက်ခြင်း→ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောစပ်ခြင်း (အခြားအော်ဂဲနစ် - အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ခြင်း၊ NPK≥4%၊ အော်ဂဲနစ်≥30%) → granulation → package ။ မှတ်ချက် - ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ရည်ညွှန်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
1. စည် dumper
ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအချဉ်ဖောက်ခြင်းနှင့်ရင့်မှည့်ခြင်းသို့အပြည့်အ ၀ သွတ်သွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောလမ်းလျှောက် dumpers၊ helix နှစ်မျိုးသုံး dumpers, grooved ပလပ်, groove ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် tracked dumpers ကဲ့သို့သောပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းများ၊ နေရာများနှင့်ထုတ်ကုန်များအရရွေးချယ်နိုင်သည်။
စိမ်ကုန်ကြမ်းသည်ဒေါင်လိုက်ကွင်းဆက်ကြိတ်စက်ထဲသို့ ၀ င်သည်၊ ၎င်းတွင်ရေပါဝင်မှုသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။ အမှုန်အရွယ်အစားမှာအမှာ ၂၀ မှ ၃၀ အထိဖြစ်ပြီး၊
ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်ပုံသေနည်းအတိုင်းအရန်ပစ္စည်းကိုထည့်ပြီးရောနှောပါရောစပ်ပါ။ အလျားလိုက်ရောနှောခြင်းတွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ uniaxial mixer နှင့် double-axis mixer ။
4. သစ်တစ်ခုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulator
အမျိုးမျိုးသောဖော်မြူလာအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သောစက်၏အရည်အချင်းပြည့်မှီသော granulation နှုန်းသည် ၉၀% အထိမြင့်မားသည်။ အမှုန်များ၏ဖိစီးမှုစွမ်းအားသည် disk granulation နှင့် drum granulation တို့၏စွမ်းအားထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး sherical rate သည် ၁၅% အောက်သာရှိသည်။
rounding machine သည် granulation ပြီးနောက် granulation အမှုန့်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ အလှဆင်နိုင်သည်။ granulation သို့မဟုတ် disk granulation ဖြစ်စဉ်ကို extruding ပြီးနောက်, rounding ပစ်ပြီးနောက်, ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်အရွယ်အစား, တိကျသော round, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တောက်ပခြင်းနှင့်ချောမွေ့, ကြီးမားသောအမှုန်အစွမ်းသတ္တိနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာ၏အလင်းအထွက်နှုန်း 98% အထိမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
စက်၏အမြီးတွင်တပ်ဆင်ထားသောပန်ကာမှတဆင့်နှာခေါင်းအနေအထားရှိလေပူမီးဖိုရှိအပူအရင်းအမြစ်ကိုစက်၏အမြီးတွင်တပ်ဆင်ထားသောပန်ကာမှတဆင့်အပူပေးစက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုပ်ထုတ်ပေးသည်။ သို့မှသာပစ္စည်းသည်လေပူနှင့်ထိတွေ့ပြီးရေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အမှုန်များ၏ content ။
အအေးပေးစက်သည်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်အပူချိန်တစ်ခုတွင်အမှုန်များကိုအအေးခံ။ အမှုန်များ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချ။ အမှုန်များ၏ရေပါဝင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကုန်ချောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့်ခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဆန်ခါပြီးနောက်အရည်အချင်းရှိသောအမှုန်များကိုအဖုံးအုပ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီးအရည်အချင်းမပြည့်မီသောအမှုန်များကိုဒေါင်လိုက်ကွင်းဆက်ကြိတ်ခွဲစက်ထဲသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည်။ စက်သည်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်အစားထိုးရန်လွယ်ကူသောပေါင်းစပ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာလည်ပတ်လွယ်ကူချောမွေ့သည်။ ၎င်းသည်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၈ ။ ထုပ်ပိုးစက်
အမှုန့်များပါ ၀ င်သောအမှုန့်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အမှုန်များသည်အမှုန်များကိုလှပစေရုံသာမကအမှုန်များ၏မာကျောမှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များပိတ်ဆို့ခြင်းကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးရန်အတွက်အလှည့်ကျသည့်စက်သည်အထူးအရည်ပစ္စည်းပက်ဖြန်းသည့်နည်းပညာနှင့်အမှုန့်အမှုန့်မှုတ်ဆေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
အမှုန်များ coated ပြီးနောက်သူတို့ထုပ်ပိုးစက်ကထုပ်ပိုးနေကြသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းစက်သည်အလိုအလျောက်မြင့်မားပြီးအလေးချိန်၊ ချုပ်ခြင်း၊ ထုပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကိုပေါင်းစပ်သည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာအရေအတွက်ထုပ်ပိုးမှုကိုသိရှိပြီးထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိရောက်ပြီးတိကျစေသည်။